WINDOWS PHONE 8.1, 8, 7.5,7များတွင် မြန်မာ FONT ထည့်သွင်းနည်း - H.A.K mobile Services
H.A.K mobile Services
Paid Group Firmware များ လာ​ရောက်ဝယ်နိုင်ပါတယ်........
_Crack Tool များ
နည်းပညာ PDF များ
Home Windows Phone မြန်​မာစာ WINDOWS PHONE 8.1, 8, 7.5,7များတွင် မြန်မာ FONT ထည့်သွင်းနည်း
WINDOWS PHONE 8.1, 8, 7.5,7များတွင် မြန်မာ FONT ထည့်သွင်းနည်း
HAK Mobile Services December 27, 2015 Windows Phone မြန်​မာစာ,
မင်္ဂလာပါ ပါ ဗဟုသုတ အ​နေနဲ့ ပြန်​ ဇူးနစ်​ နည်းပညာမှ share ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​
Windows Phone အသုံးပြုတဲ့ Users များအတွက် မြန်မာ Font ထည့်သွင်း နည်းကို မျှဝေလိုက်ပါတယ် … Windows ဖုန်းတိုင်းတော့ မစမ်းဘူးပါဘူး … Nokia Lumina 925 နှင့် Lumina 720 ကိုတော့ စမ်းသပ်ပြီးစီးထားပါတယ် … Windows Phone တွေကို မြန်မာ Font ထည့်နည်းလေးကို မေးတဲ့သူ များလာလို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ် …
၁။ မိမိ မြန်မာ Font ထည့်မည့် ဖုန်းတွင် Internet Connection (သို့) Wifi Internet Connection ရရှိနေရပါမည်။
၂။ ZG Text ၏ မူရင်း Link ကို သွားပြီး ZG Text ကို install ပြုလုပ်ပါ။
၃။ Install ပြုလုပ်ပြီးပါက ဖုန်းကို Reboot ချပေးပါ။ ဖုန်းပြန်တက် လာလျှင် မြန်မာစာများကို ကောင်းမွန်စာ မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ။
၄။ Windows Phone အတွက် မြန်မာ Keyboard ကို သီးသန့် ဖန်တီးထားခြင်း မရှိပါဘူးခဗျာ … မိမိ အသုံးပြုချင်တဲ့ Application ရဲ့ Phone Memory>>Data>>Application မှာ ZG Text ကို Copy, Paste ပြုလုပ်ပေးပါက မြန်မာ Keyboard ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် …
အဆင်ပြေစွာ မြန်မာ Font ထည့်သွင်းနိုင်ကြပါစေခဗျာ …
သူငယ်​ချင်းများအားလုံး လာ​ရောက်​​ပေးတာ ​ကျေးဇူးတင်းပါတယ်​
အကူညီလိုပါက ဆက်​သွယ်​ရန်​ (09796900628)
ဆက်​သွယ်​ပါ ကျွန်​​တော်​ တင်ထားတဲ့ post ​လေး​တွေကို ​
** Step-3. " << SKIP AD >> ".for SKIP THIS AD ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Tags # Windows Phone မြန်​မာစာ
About HAK Mobile Services
Windows Phone မြန်​မာစာ
Posted by HAK Mobile Services at December 27, 2015
Labels: Windows Phone မြန်​မာစာ
HAK Mobile Services
Hello R100 firmware 100% free download
မင်္ဂလာပါ Hello R100 Firmware လေပါ 100% အဆင်ပြေပါတယ် ကျွန်တော် တင်ပုံတင်နည်းပါ war file ထဲမှာ ပုံလေနဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ် Firmware လေအောက...
Hello P8 firmware error မရှိ
မင်္ဂလာပါ Hello P8 firmware ​လေပါ ညီတစ်​​ယောက်​အကူညီ လို​နေတာနဲ့ အင်​တာနက်​ဖိုး 3000 ကျပ်​ ဖုန်း​ဘေထဲ​ပေးပါတယ်​ ​ကျေးဇူးပါ ညီ မ...
Mobile မျိုးစုံ firmware တင်းနည်း Pdf
မင်္ဂလာပါ Mobile မျိုးစုံကို Firmware တင်​နည်း Fdf ​လေပါ ဆက်​ပြင်​ဆရာ​တွေ အတွက်​​တော့ လိုပါတယ်​ ​လေ့လာ​နေဆဲ့ အကို​တွေညီ​တွေလဲ လိ...
P1 Game တွေကို Android ပေါ်မှာဆော့ကြမယ်ဗျာ
Harvest Moon - Game file 79.33MB (အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ apk နဲ့ဖွင့်ပါ) download ရေနံ - 279MB ( အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ apk နဲ့ဖွင့်ပါ) ...
huawei comport driver လေးများ
မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ huawei driver လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော် 180000 တန် Dongle ကနေရလာတာလေးပါ အသုံးလိုမယ်ထင်ရင် ဒေါင်နိုင်ပါတယ် Huawei ...
MTK ဖုန်းများကို IMEI ပြန်​​ရေး​ပေးမဲ့ Tool
မင်္ဂလာပါ ဒီရပ်​ပိုင်း IMEI Error ​တွေဘဲ ​တွေ​နေရပါတယ်​ အကူညီလာ​တောင်းထားလို ရှာပြီ တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ MTK firmware များကို ...
coolpad 7060S-S40 firmware pass ခံမထားပါဘူး
မင်္ဂလာ သူငယ်​ချင်းတို့ ဒီနေ့တင်ပေးမှာကတော့ coolpad 7060S-S40 firmware လေးတွေလို တင်ပေးလိုပါတယ် ဘာ pass မှမခံထားပါဘူး လိုချင်...
Huawei C8816 Board Firmware
Huawei C8816 Board Firmware C8816_M101018_Board Software_China_China Telecom_An ... 21GNL.zip Free downloae က်အောင်ကျော် နည်းပညာမှတ်စု...
Xiaomi Diagrams All 14 File
မင်္ဂလာ ပါ Xiaomi Diagrams လေးတွေ ရှိသလောက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Mi3 download Mi4-LTE download Redmi Note3(MTK) download Redmi No...
NCK Dongle Crack MTK & Qualcomm & Samsung
မင်္ဂလာ ပါ NCK Dongle Crack လေးတွေရပြီနော် Samsung အတွက်﻿လည်းရပြီ MTK အတွက်﻿လည်းရပြီ Qualcomm အတွက်လဲရပြီ ကဲ လိုအပ်တဲ့သူတွေ အောက်ကလ...
Archive August (15) July (29) June (22) May (6) March (3) February (10) August (1) March (7) February (39) January (39) December (17)
Android Adb ဆိုင်​ရာ Android Application Android EMMC Backup tool Android game ကြီး Android Pattern Lock Tool Android Root apk Android Virus ဆိုင်​ရာ Android မြန်​မာ font AOVO Attila Firmware Board Firmware Bravo clone firmware Coc နည်းပညာ COC မြန်​မာ font Coolpad firmware Crack Tool EMMC DATA Facebook ဆိုင်​ရာ GFive A97 LCD Error Fix ရှင်းနည်း Google Installer Hacking Pdf Hardware ဆိုင်​ရာ pdf Hello firmware Hisilicon Board Firmware Honor firmware HOPO Huawei Diagram huawei driver Huawei Firmware Huawei flash tool firmware Huawei G730-U00 mmfont 100% Huawei Network Unlock Tool Huawei Root ILOVFA Firmware IMEI Tool imobile firmware kimfly LG Root Tool mi account remove Mobile LCD Fix error ရှင်းနည်း Mobile phone ADB Errot tool Mobile မျိုးစုံ firmware တင်းနည်း Pdf MTK Droid tool My phone firmware Oppo Diagram Oppo firmware Oppo Root PDF Qualcomm Android IMEI writer Samsung Diagrams Samsung firmware Samsung FRP Reset File များ Samsung Root Services Tool Sp flash tool exe TITAN Vivo Firmware vivo root Windows Phone မြန်​မာစာ X Bo firmware X-Bo V3-M3-V5 LCD Fix XBO B3 - M3 - V5 - V11 Display Fix error ​ Xiaomi Diagrams Xiaomi Firmwares နည်းပညာ ဆိုင်​ရာ မိုဘိုင်းဖုန်းမျိုးစုံ Firmware ပြုပြင်ရေးသားနည်း
Che2-UL00 & CHC-U01 Hisilicon Board Firmware
Che2-UL00 & CHC-U01 Hisilicon Board Firmware လေးပါ လိုင်ပေါ်က အစ်ကို တစ်ယောက် အကူညီ တောင်ထားလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Hisilicon BoardF...